လုံးဝမရှုံးခဲ့ပါဘူး လိုသုံးဆိုတဲ့စကားလုံးနောက်မှာ – Hlataw.com
ကပိုင် ရွာ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ သူဌေး နှစ်ယောက်တွင် သား ၊ သမီး တ ယောက်စီရှိကြသည်။ ချောကြ လှသည်။ အရွယ်ရောက် သော် သူတို့ ကို ပေးစားလိုက်ကြ ၏။ ရွှေပေါ်မြတင် ။ နတ်ရေးတဲ့ဖူးစာ။ ကောင် မ လေးက နာမည် မဆန်း။ ယခု သားသမီးယောက် မွေးပြီးပြီ။ တသားမွေး တ သွေးလှ ဆိုတဲ့ စကား မဆန်းက သက်သေ ပြသည်။ မွေးလေ လှလေ ဆိုသော် မလွန်။ မ မွေးခင် က ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် လှ၏။ သား သုံးယောက် အ မေဖြစ်တော့ ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွားလှ ပြန်ချေသည်။ သို့ သော် မဆန်းကို တရွာလုံး တနယ်လုံးမှ ကျား တွေ မပြစ်မှားကြပါ။ သူတို့ လင် မယားရဲ့ စေတနာ ကုသိုလ် ကူညီမှု အလှူတွေက တနယ်လုံး အနှံ့။ လေးစားကြ၏။ ထို့ ကြောင့် လက်ရှောင်ကြပါ၏။ သို့ သော် ယခု ကြားရ သော ဇာတ်လမ်းက မယုံနိုင် စရာ။ ဆန်းလှ ပါသည်။ ဤသို့ တည်း။ ရွာအစွန်မှာနေ သော ကျွဲကြီး ဆိုသူရှိသည်။
နာမည် ရင်းမဟုတ်။ လူကောင်ကြီးပြီး အားသန် သောကြောင့် ခေါ်တာပြစ်သည်။ ဆင်းရဲသည်။ ကြုံရာကျဖမ်း အလုပ်သမားဖြစ်ပြီး မယားနှင့် က လေး ၂ ယောက် ရှိသည်။ လင် မယားနှစ်ယောက်လုံး ရုပ်က နာတော်မူပါ သည်။ ကျွဲကြီး က ပို၍နာသည်။ အသားကမဲ သွားကကျဲ ၊ နှုတ်ခမ်းက တွဲ။ ဘဝကလည်းနိမ့်တော့ လူတိုင်းကို သူက အောက်ကျို့ပျူငှာစွာ ဆက်ဆံ၏။ သို့ သော် မူးလာရင် မိန်းမ ကို နည်းနည်းရန်လုပ် တတ်၏။ ရွာထဲမှာ ယခုပြောနေကြတာက ရွှေရုပ်လေးလို လှသော မဆန်းက ထို ငနာကျွဲကြီးနှင့် တိတ်တိတ် ပုန်း ဖြစ်နေကြသည်ဟူ၏။ ထိုကိစ္စ ကို ကြာကူလီ သတင်းထောက် ငသိန်း ကြားတော့ ကျွဲကြီးကို သွားဗျူးသည်။ ကျွဲကြီးက အတတ ငသိန်းက ဂျလည်။ အရက် လေးဝယ်တိုက်၊ မူးလာတော့ ချောက် လိုက် အစ် လိုက် လုပ်သောအခါ ကျွဲကြီးက ဇာတ်စုံ ခင်းပြ ပါတော့သည်။
မိုးသည်းသည်းရွာသော တ နေ့။ ကျွဲကြီးက မဆန်းအိမ်မှာ ထင်းပေါက်နေ၏။ ရှား သား အမျက်ပါ၍ အားရှိအားကုန်ပေါက် ရသည်။ ပုဆိန်ကို ကိုင်မြှောက် ၊ အားနှင့် နွှဲ၍ ပေါက်တာ တောင် ပဲ့ထွက်သွားတော့ ထင်းစက တထွာ လောက်။ ကျွဲကြီးပုဆိုးကို တိုတိုပြင် ဝတ်၊ အင်္ကျီလက်မောင်း ပင့် လိပ်တင် ချွေးကမိုးရေ အပြိုင် ကျအောင် တွယ် ရ ပါသည်။ ထိုသို့ ကျွဲကြီး တ ယောက် အားနှင့်မာန်နှင့် လုပ် နေတာကို တိုက်ထဲ က ရွှေရုပ်လေးက ငေး၍ ကြည့်နေပါ၏။ မျက်တောင် ပင် မခတ်။ အ မြောင်းထ နေ သော လက်မောင်းသားတွေ၊ မာကျစ် တောင့်တင်းသော ရင် အုပ် ။တုတ်ခိုင် သောပေါင် တံ ထွားကြီးတွေ ။ မဆန်း အ သေးစိတ် ကြည့် ။ မဝ သောအကြည့် နဲ့ကြည့် ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်း ခုန်နေပါ၏။ ပီကေ လေး မြုံ့ရင်း တွေးနေသည်။ ယောက်ျား က မိုးကုတ် သွားသည်။ က လေး တွေက ကျောင်း မှာ။
အိမ်မှာ မဆန်းတ ယောက်ထဲ။ မိုးက သည်း သည်း လာ၍ တရွာလုံး အိမ်ထဲမှာ အောင်းနေကြမည်။ မဆန်း စိတ် တွေ အရမ်း လှုပ် ရှားလာ၏။ သည်အခိုက့့် အား ! ကျွဲကြီးဆီက အသံ။ ထင်းစတခုက လွင့်စင်ပြီး သူ့ ပေါင် လာစိုက်၏။ ချက်ချင်း သွေး ကျလာသည်။ ကို ကျွဲကြီး။ ဒီကိုလာခဲ့။ ဆေးထည့် ရ အောင်။ ကျွဲကြီး ကုလားထိုင်ပေါ်ထိုင် ရင်း မျက်နှာရှုံ့တွ နေသည်။မဆန်းက သူ့ ပေါင် တွင် စူးဝင် နေ သော ညောင့်ကို ကြင် နာစွာ နှုတ်ပေး၏။ လက်တဘက်က ကျွဲကြီးပေါင် ရင်းကို ဖိကိုင်ပြီး နောက်တဘက်က ညောင့်ကို နှုတ်သည်။ အား အား! နာလွန်းလို့ ကျွဲကြီး အော်ရင်း ယောင် ယမ်းကိုင် သည် က မဆန်းရဲ့ပုခုံး။ နုနုအိအိလေး။ အာ! ဆန်းဆန်း ကန်တော့နော် ။ အားနာလိုက်တာဗျာ တဲ့။ မောင် ကျွဲကြီးက တောင်းပန် ရှာသည်။ မဆန်းက အနာကို အရက်ပြန် သုတ်၏။ အား ။ အားလားလား။
ကျွဲကြီး အော်သည်။ ခြေ ထောက် က လှုပ်သဖြင့် မဆန်းက မလှုပ်နိုင် အောင် သူမ ပေါင်ကြားထဲ ညှပ်လိုက်သည်။ ကျွဲကြီး တိတ်သွား၏။ အံ့သြလွန်း၍ မျက်လုံးကြီးပြူးနေ၏။ရဲရဲလည်း မကြည့်ဝန့် ။မဆန်း၏ နူးညံ့ထွေးအိသော ပေါင် ခြံကြား အ တွေ့ကြောင့် ကျွဲကြီး ဒုက္ခဖြစ်လာ၏။ ညောင့်စူးတာ မေ့ပြီး သူ့ ဟာက ထ ချင် လာသည်။ကျွဲကြီး လက်တဘက်နဲ့ ဖိ နှိမ်ထားသည်။ မဆန်းက အနာကျက်ဆေးထည့်ဘို့ ပြင်တော့ သူမ အ နွေးထည် အင်္ကျီက ရှုပ်သဖြင့် ချွတ်ချ လိုက် ရာ အတွင်းက လည်ဟိုက် နိုင် လွန် အကျီ ပါးလေးသာ ကျန်သည်။ ကျွဲကြီးအတွက် အဲဒါမှ ပိုခက်ချေ၏။ မဆန်းရဲ့ ဖြူဖွေး ဝင်းစက်သော နို့ကြီးတွေ အသီး ကလွဲ အကုန်မြင်နေရ ပြီ။ လှ လိုက်တာ။သူ့ တသက် တခါမှ မမြင် ဖူးပါတကား။ ပြီးတော့ သူ့ ခြေ ထောက်ကို မဆန်းက ပေါင်ကြား ဆွဲသွင်းထားသဖြင့် မလှုပ်ဝံ့။
သို့ သော် သူ့ ခြေမ က မဆန်းရဲ့ မုန့် ပေါင်းနဲ့ ထိထိမိမိကြီး ထိနေတာ ကို သူသိနေသည်။ ကျွဲကြီး ချွေးပြန်နေသည်။ မဆန်းကို သူ စိတ် နဲ့ တောင် မပြစ်မှားရဲ။ သူဌေး နဲ့ အမွဲ။ မင်းသမီးနဲ့ လူကြမ်း။ ထို့ ကြောင့် သူ့ စိတ်တွေ အ ဝေးလွှင့်၏။ ဒါပေမဲ့့။ မဆန်းကသူ့ ပေါင် ကို လက်လှလှ နုနုလေးနဲ့ ပွတ်သပ် ဆေးထည့် ဆေးလိမ်းပေးရင်း နယ် ကျော် ကျော်လာသည်။ပေါင် ရင်းထိ ရောက်လာ ပြီး တခါတခါ သူ့ ဟာကို လာထိသည်။သူက နောက်တွန့် ပေးသော်လည်း မဆန်းက မသိသလို ။ ကျွဲကြီး စိတ်တွေ တအားထလာ၏။ သူ့ ဒူးခေါင်းတဘက်ကိုလည်း မဆန်းက နို့ကြီးနဲ့ ပွတ်နေသလိုပင်။ ခြေမ ဖျားလေးမှာလည်း တစ တစ မဆန်း ဟာထဲ ဝင်နေပြန်၏။ကြာရင် ပြသနာ တက် နိုင် သည်။ ဆန်းဆန်း ကျုပ်ပြန်တော့မယ်။ ရပါပြီ။ အနာ သက်သာသွားပြီ။ ကျေး ကျေးဇူး ဘဲ နော့်။
ကျွဲကြီး ကထိုသို့ ပြောတော့ မဆန်းက နှုတ်ခမ်းစူ ပြီး ဒုက္ခပါလား ကိုကျွဲ ရယ်။ ဒီက ဒိလောက် ပြုစုနေ တဲ့ဟာကို ။ ခများမို့ ငြင်းချင် တယ်။ ပြောရင်း ကျွဲကြီး ခြေ ထောက်ကို ခပ်တင်းတင်း ထပ် ဆွဲညှပ် လိုက်တော့ ခြေမက ပို၍ မြုပ်ဝင် သွား သည်။ ပေါင် ရင်းကိုင် တဲ့မဆန်းလက်တွေကလည်း ပို ၍ ပယ်နယ်လာသည်။ ဆေးလိမ်းတာ မဟုတ် တော့။ ကျွဲကြီးက အ နေ သေး၏။ ဟို လေ ကြာရင် ကျုပ် မ နေနိုင် ရင် ခက်ကုန်လိမ့် မယ် ဗျ။ မဆန်းက မျက်နှာလေး ချစ်စဖွယ် မဲ့ပြီး ဘာခက်မှာလဲ ကိုလူအ ရယ်။ ဒီက အဓိကဘဲ ဟာကို ။ ကျွဲကြီး တွေ ဝေ နေ၏။အိပ်မက်များ မက်နေတာလားဗျာ လို့ တိုးတိုး ပြောမိသည်။ ကဲ ! အိမ်မက် ဟုတ်မဟုတ် သိအောင့့်။ မဆန်းက ကုလားထိုင်ပေါ်ထိုင်နေတဲ့ ကျွဲကြီး အ ပေါ်တက်ခွ ထိုင် လိုက်လေ၏။ မဆန်းသည် တကယ်ပင် ဆန်းပါ၏။
ကျွဲကြီးက သူ့ ရုပ်နာကြီးဖြင့် မဆန်းကို မနမ်းရက် စဉ်မှာပင် လှသောမဆန်းက ကျွဲကြီးရဲ့ ထူအမ်း သော နှုတ်ခမ်းတွေကို အငမ်းမရ စ စုပ်သည်။ ထို့ နောက် ကျွဲကြီးရဲ့ ဖုထစ်သော ကြွက်သားတွေ ကို မက်မောစွာ ပွတ်သပ်သည်။ တရွရွထိတွေ့မှု အရသာက ကျွဲကြီးကို ဆာလောင် တပ်မက်စေ၏။ ကျွဲကြီးလည်း အ တွေ့ကို မ ရှောင် နိုင်တော့သ ဖြင့် သူ့ အ ပေါ်ခွထိုင်နေတဲ့ မဆန်းရဲ့ ကြီးမား ကားထွက်နေ သော တင် သားတွေကို လက်နဲ့ အားရပါးရ ကိုင် ညှစ်လိုက်သည်။ နောက် သူ့ ရင် ဘတ် ကို ထိပွတ်နေသည့် မဆန်း ရဲ့နို့ကြီးတွေကို ချွတ်စို့ ၏။ ကောင်းလိုက်တာ။ ဒီလောက်လှတဲ့ နို့ကြီးတွေကို စိတ်ကြိုက် ကိုင် ရ စို့ ရလိမ့်မယ် လို့ သူ ဘယ်တုန်းကမှ မထင် ခဲ့။မဆန်းက အလိုက်သင့် ကော့ပေးသည်။ ကျွဲကြီးစိတ်တွေ ထထ လာ၏။
အောက်က သူ့ ဟာကလည်း မဆန်း ဖိထိုင် ထား တဲ့ကြားက ရုန်းနေ ချေသည်။ ကျွဲကြီးက ခါးလှုပ်တာနဲ့ ချက်ချင်း မဆန်းက အ ပေါ်ကြွကာ ပုဆိုးထဲ လုံးခွေနေ သော ဟိုဟာကို လက်လှလှ လေးနဲ့ ဆွဲထုတ်၏။ ဘတ်ကနဲ အပြင် ထွက် မာန်ဖီနေတဲ့ ကျွဲကြီးဟာ ကြီးကို မဆန်းက လက်နဲ့ ဖွဖွဆုပ် လျှောတိုက် သည်။ ကျွဲကြီး တကိုယ်လုံး တုန်သွားသည်။ မင်း သမီးလေး အလှကြောင့် ဖီးက ၃ ဆ လောက် ကို တက်လာသည်။ မဆန်းက သူမ ပေါင် ကို နည်းနည်းကား ကျွဲကြီး အ ချောင်းကို သူမဟာထဲ အ သေအချာ ထည့်၏။ ပြွတ် ကနဲ အသံပေး ဝင် သွားသည်။ အား ကောင်းလိုက်တာ ။ ကျွဲကြီး စိမ့် တက်လာတဲ့ အရသာကို မှိန်းခံစားနေ တုန်း မဆန်းက ကြွလိုက် ထိုင် လိုက် လုပ်၏။ အ တော်ကို ကြပ်နေ သေးသော်လည်း ၂ ယောက် လုံးရဲ့ ချောဆီတွေ ကြောင့် အဝင် အထွက် ကောင်း လှပါသည်။
တဖြည်းဖြည်း ဒီဂရီ မြင့်လာတော့ ကျွဲကြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းလုပ်သည်။မဆန်းရဲ့ကိုယ် ကို ဖင် က ကိုင်မြှောက် ပြန်ချ သွက်သွက် လုပ်၏။ အ အ ကောင်းလိုက်တာ ကိုရယ်။ လုပ်ပါ့့ဆောင့် ပါ ။ သိပ်ကြိုက်တယ် ကွာ တဲ့။ မဆန်းရဲ့ ရမက်စကားတွေကြောင့် ကျွဲကြီး က ပိုကြမ်းတော့သည်။ အသားကုန် ဆော်တော့၏။ မဆန်းကို အ နေအထားမပျက် တပ်လျက် ပွေ့ ချီသွားပြီး ကုတင် စောင်းမှာတင်၏။ မဆန်း အ ပေါ်ပိုင်းက ကုတင်ပေါ်၊ အောက်ပိုင်း က လေဟာနယ်မှာ။ ကျွဲကြီးက အားကောင်းသူ ဆိုတော့ မဆန်းကိုယ်ကို အသာလေး ပေါင် က ကိုင် မြှောက်ထားသည်။ သူ က မတ် တတ် အ နေအထားမှာ မဆန်းရဲ့မုန့်ဖောင်းလေးက သူ့ ဟာရှေ့ ကွက်တိကျနေသည်။ မုန့်ဖောင်းလေး အောက်ခြေက ဟာထဲ သူ့ ဟာ မည်းမည်းတုတ်တုတ်ကြီးက အညှာတာ ကင်းမဲ့စွာ ထိုးစိုက် ဝင်နေသည်။
ဆန်းဆန်း နာ လားဟင် ။ ကျွဲကြီးက သနားစွာမေးတော့ ဟာ ဘာဆန်းဆန်းလဲကွာ။ ငါ့မိန်းမ ငါ့မယားလို့အားရပါးရ ခေါ်စမ်းပါ။ လုပ် လုပ် မောင့်စိတ်ကြိုက်လုပ်။မယားက ကြမ်း မှ ကြိုက်တာ။ သည်လောက်တောင် ရှိမှတော့ ကျွဲကြီး အသား ကုန် တီးတော့သည်။ တ ဖောင်း ဖောင်း မြည် နေ တော့၏။ မဆန်းတကိုယ်လုံး လူးခါနေသည်။ သူမက ကျွဲကြီးလက်မောင်းတွေ ဆုပ်ကိုင် ရင်း တောင့် ခံသည်။ ဆောင့်ချက်တိုင်း အံကျဖြစ်အောင် ကော့ပေး လှုပ်ပေးသည်။ ကောင်းလိုက်တာ ယော်ျားကြီးရယ်။ လုပ် လုပ် မညှာနဲ့။ အား ကောင်းလိုက်တာ ။ ဒီလိုကို ခံချင် တာ ကြာလှပြီ လင် ရယ် တဲ့။ ကျွဲကြီး တသက်တာလည်း ဒီလောက်ကောင်းတာ အရသာရှိတာ မရှိပါ။
ဒါနဲ့ သုံးချီ ဆက်တိုက် ကစ်ထည့်လိုက်သည်။ ၄ ကြိမ်မြောက် စ ဘို့ ကျွဲကြီးက မဆန်းကို တွန်း လှဲတော့ မင်းသမီးက လင် ရယ် မောလှပြီ။ နောက် နေ့ မှ နော်တဲ့။ ကျွဲကြီးက အဲ့လိုလား။ ရပါတယ် သဲလေးရယ် လို့ ပြောပြီး ရုပ်ဆိုးနှာခေါင်းကြီးနဲ့ မင်းသမီးလေး ပါးနှစ်ဘက်ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် နမ်းလိုက်ပါ၏။ ရွှတ် ရွှတ် …. တနယ်လုံးက မင်းသမီးလေး မဆန်းသည် မင်းသားလိုချောသော ယောက်ျားနဲ့ အားမရဘဲ အဘယ့်ကြောင့် လူကြမ်းလို နာသည့် ကျွဲကြီး ကို ခံ ရပါသနည်း ဆိုတာ နားမလည်နိုင်ကြ တော့ပါ …..ပြီးပါပြီ။
ကြံ့ခိုင်ချင်ယောင်ဆောင်ပီးတော့ နေထိုင် တတ်လာတာပါ
မိမိမမြင်ရတဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာ ဘာရှိမလဲဆိုတာ စပ်စုတတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပါ